Toe-tsaina mahantra | NewsMada
Mahavariana ihany indraindray ! Anisan’ny firenena dimy farany mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara. Hilaza koa anefa ny Malagasy maherin’ny 25 tapitrisa fa tsy hanaiky ho mahantra ara-tsaina izany, na ny hatramin’ireo tsy nianatra na tsy ampy fahalalana aza. Saingy miaiky ny rehetra fa manjaka ny gaboraraka eto amintsika, tsy ampy ny fanarahan-dalàna sady tsy ampy ny fampiharana azy. Isaorana ny tompon’andraiki-panjakana nanome toky hitondra fiovana amin’ny lafiny samihafa, ary singanina amin’izany ny ady amin’ny kolikoly, zary hita manerana sehatra rehetra. Fa misy ny mety hiafina ao ambadiky ny hoe “satria isika mahantra, tsy misy ny asa, tsy misy ny fihariana ahafahana mivelona, sns”.
Miainga any amin’ny toe-tsaina ny zava-drehetra, na inona na inona ataon’ny tsirairay. Rehefa mahantra ny toe-tsaina, tonga ho azy ny fanaovana zavatra gaboraraka amin’ny lafiny rehetra. Tsy miandry ho tratran’ny lalàna na ny sazy vao hiova, fa miainga avy ao anaty ny fihetsika. Tsy ao intsony ny fitandroana ny fahadiovana, toy ny fanaovana maloto eny rehetra eny, ny fanariana fako eran’ny arabe. Ny fandoroana ala sy ny tanety, mandripaka ny biby sy ny zavamaniry. Ny fanapotehana na fangalarana ny fotodrafitrasa tsara vokatry ny tiakely sy ny toe-tsaina tsy te hanana ny tsara, sns.
Amin’izao fotoana izao, amboarina ny ankamaroan’ny lalana eto Antananarivo, indrindra ny lalam-pirenena eto an-dRenivohitra (RN 1, RN 2, RN 3, RN 4). Eo koa ny fampifandraisana ny lalam-pirenena, toy ny RN 3 amin’ny RN 2, ohatra. Efa nisy ny natao teo aloha, toy ny lalana nandraisana ny frankofonia (Tsarasaotra-(Ivato), ny arabe Marais Masay sy ny By Pass, sns. Fotodrafitrasa hanatsarana ny fiainam-bahoaka daholo ireny, ary vola avy any ivelany no nampiasaina. Misy amin’izy ireny ny notrosaina, honeran’ny taranaka faramandimby satria mandritra ny 40 taona ny fandoavana azy tsikelikely, farafahakeliny. Indrisy, tsy miasa loha amin’izany ny ankamaroantsika, fa manjaka loatra ny toe-tsaina gaboraraka, nefa tsy sahy mandray fepetra hentitra ny tompon’andraikitra samihafa, sady fotoam-pifidianana rahateo izao.